Translator Newsletter: Fivoaran’ny fiteny, Ny Polyglotte (mpahay teny maro) tanora indrindra ary tantara maro hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2019 4:24 GMT
Nanomboka ny diany momba ny fiteny teo amin'ny faha-13 taonany i Timothy Doner ary afaka miteny fiteny 20 samihafa izy ankehitriny. Ahoana no nahatonga izany fitiavana ny teny sy ny fahatakarana izany? Misy zavatra hafa ve ny fiteny mihoatra noho ny hoe afaka manafatra sakafo amin'ny trano fisakafoanana? (Heveriko fa afaka miteny ENY lehibe isika rehetra amin'izany.) Fantaro bebe kokoa ny momba ny tantaran'i Timothy ao amin'ity lahatsoratra mahafinaritra izay nosoratany ho an'ny TED mitondra ny lohateny hoe “Nahoana aho no nampianatra fiteny 20 tamin'ny tenako- ary inona ny zavatra nianarako momba ny tenako tao anatin'izany.”
Raha mpandika teny matihanina mahaleotena ianao, toy ny ankamaroantsika ato amin'ny vondrom-piarahamonina GV, dia mety ho liana amin'ny famakiana ny tatitra momba ny Tsenan'ny Rindrambaiko amin'ny Fandikanteny Manerantany 2016. Araka ny filazan'ny Whatech.com hoe “manome fomba fijery fototra momba ny indostria ny tatitra, ka anisan'izany ny famaritana, ny fanasokajiana, ny fampiharana ary ny rafitry ny sehatry ny indostria.” Mifantoka indrindra amin'ny indostrian'ny fandikan-teny any Etazonia, Eorôpa, Japana ary Shina izany.
Efa nanontany tena izay tantara fohy be mpandika indrindra ve? Fantatra fa ilay angano Afrikana nosoratan'i Ngugi wa Thiong'o antsoina hoe “Ny Revolisiona Mijoro: Na Nahoana ny Olombelona no Mandeha Mjoro” izany. Hatramin'izao dia efa voadika tamin'ny fiteny 54 izany! Vakio ato ny momba izany.
Raha sambany mamaky ity gazety ity ianao ary te-hiaraka amin'ny Global Voices, dia lazao anay bebe kokoa ato ny momba anao!